Ezinye iindawo zeshishini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ezinye iindawo zoshishino
Ingakanani imali ehamba kwiWebMoney
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imali kwiWebMoney? Ngokubanzi, kwangoko, kodwa ungaqala ukuphakuzela ngosuku. Ixesha lokufumana imali kwisipaji se-WM emva kokuzaliswa kwakhona kuxhomekeke kwindlela yokugcwalisa isipaji. Ukukhawuleza ...
Chaza, nceda, ngokucacileyo, yintoni inkampani yobunjineli? Yintoni abayenzayo?
Nceda uchaze ngokucacileyo, yintoni iNkampani yezoBunjineli? Ingaba wenza ntoni? Ishishini elithile kufuneka liqale ukuvelisa iimveliso ezintsha, umzekelo, iiturbines ezintsha. Izixhobo zemveliso ezindala azikuvumeli ukwenza oku, okanye ngokuyinxenye zikuvumele ...
kufuneka wenze ntoni ngezabelo zeAll-Russian Automobile Alliance?
kufuneka wenze ntoni ngezabelo zeAll-Russian Automobile Alliance? NgokukaLyubov Lepshkina, ndingazonyusa izabelo kwiVVP. I-OJSC YOKUZENZEKA KONKE-I-RUSSIAN Alliance (OJSC "AVVA") evulekileyo ye-Joint-Stock Inkampani ye-Automobile All-Russian Alliance (OJSC AVVA) yasekwa ...
Binarium Ngubani ongayichazela nge-Binarium indawo, ingumngcwabo kwaye ngubani ongayifumana?
I-Binarium Ngubani onokuxelela malunga nendawo ye-binarium, ngaba bubuqhinga kwaye ngubani onokwenza imali kuyo? Yonke indawo, apho bacela kuqala ukutyala imali kwi-intanethi- iipesenti ezingama-90 zoqhawulo-mtshato, kungcono ucothe, kodwa ...
iinketho zokubini - umkhonyovu okanye akunjalo?
iinketho zokubini - umkhonyovu okanye akunjalo? Inketho yokubini yenye yezixhobo zemali, isivumelwano apho umthengi okanye umthengisi efumana ilungelo lokuthenga / lokuthengisa iasethi ethile ngexabiso elimisiweyo ngexesha elichaziweyo ...
Nika inkcazo yamandla C # 769; la vector ubungakanani bomzimba, ongumlinganiso wobungakanani bempembelelo emzimbeni onikiweyo wamanye amaqumrhu, kunye namabala. Umkhosi osetyenziswe kumzimba omkhulu ubangela utshintsho kwisantya okanye ...
Ziziphi iimpawu zoqoqosho lweemarike kunye nemiqathango yokusebenza kwayo?
Xela imiqondiso yoqoqosho lwentengiso kunye neemeko zendlela yokusebenza kwayo enkosi, ngokufutshane kwaye kuyaqondakala Uqoqosho lweNtengiso luqoqosho olusekwe kwimigaqo yeshishini lasimahla, ubudlelwane besivumelwano phakathi kwamashishini. Ukufumana ezi zinto zilandelayo: 1) ...
Xelela iinguqu ze-10 zokuthengisa amagama ukusuka kubalobi abahlukahlukeneyo
Nika iinkcazo ezili-10 zegama ukuThengisa kubabhali abohlukeneyo Zininzi iinkcazo zokuthengisa kuncwadi: Ukuthengisa luhlobo lomsebenzi wabantu ojolise ekwaneliseni iimfuno kunye nokufuna ngokutshintshiselana. (UFilipu Kotler) ...
Iincwadi zolonwabo PFR: I-Code yeNkqubo yoLwaphulo-mthetho kunye ne-VEB CC
Iileta zokonwaba ezivela kwiNgxowa-mali yoMhlala-phantsi yeRussian Federation: STATE UK kunye neVEB UK Yintoni umahluko, ilizwe lethu liya kusikhohlisa ngokufanayo kwaye lisishiye singenamali, njengoko bekunjalo kubazali bethu nakubazali babo, ...
Umthengi oqhelekileyo uzuza ngaphi?
Wenza malini umrhwebi ophakathi? Ungayenza ngale ndlela ilandelayo: uthatha i-1 yezigidi zeedola, wahlule kwiidiphozithi zeedola ezili-1000, ulahlekelwe yinto yonke kwisithuba seminyaka elishumi.Uze ubeke i-100 yeerandi kwi-Forex kunye ...
Yintoni ibhalansi? Imali eseleyo kwi-akhawunti kwi-minus okanye kwi-plus equilibrium, inkqubo yokulinganisa ebonisa umlinganiso okanye ulingano kuyo nayiphi na into eguqukayo.
Ndifuna inkcazelo yomsebenzi yomqhubi we-SMP
Inkcazo yomsebenzi womqhubi we-ambulensi iyimfuneko kakhulu ... bendicinga ukuba i-serfdom yapheliswa ngaphezulu kweminyaka eyi-100 eyadlulayo, ndiwathanda kakhulu amalungelo))) Ngubani onoxanduva lobusela bezixhobo emotweni ngelixa uhamba nesigulana, ...
IZiko loShishino leklasi "A". Yintoni le, kwaye yahluke njani kwiklasi "B" ???
IZiko loShishino leklasi "A". Yintoni le, kwaye yahluke njani kwiklasi "B" ??? Udidi-lodidi A Amaziko oshishino kudidi A lubandakanya izakhiwo ezihlangabezana nezi mfuno zilandelayo: 1. Amaziko oShishino Indawo yecandelo A abekwe njenge ...
I-3 $ ubuninzi kwi-ruble?
Yimalini i- $ 3 ngeeruble? 218, 79 $ 3 - yimalini ngeeruble? IBhanki eNkulu yeRussian Federation ukusukela nge-11 kaJuni ngo-2011. I-1 yeedola (i-Dola yaseMelika) = 27,7907 RUIB ...
Iyintoni inkcazo yezoshishino
Ingcaciso ngokutsho kwesinye sezichazi magama kulwimi lwesiRashiya lwale mihla, ishishini kukukwazi ukwenza izinto ngokudibeneyo namandla kunye nokusebenziseka. Kwisichazi-magama sika-V. Dahl, umntu onomdla unamandla, ubuchule kwaye uyila, ...
Ubunjani? Ndixelele nceda, uthini umgangatho?
Yintoni umgangatho? Nceda undixelele ukuba kuthetha ntoni umgangatho? Makhe ndikunike uthsuphe. Umgangatho iseti yeempawu zemveliso eyilelwe ukwanelisa isidingo ngokungqinelana nenjongo yemveliso. Emva kwayo yonke loo nto, nayiphi na imveliso iseti yeepropathi, ...
Ndifuna ukuqala ukurhweba kwiindlela ezikhethiweyo. Ndikhethile i-Olympus Trade broker. Unjani na? Ngubani o thengisa
Ndifuna ukuqala ukurhweba ngeendlela zokubini. Ndikhethe umrhwebi weOlimp Trade. Unjani yena? Ngubani othengisayo? uqhawulo-mtshato. nyusa ireyithi kwaye yonke into ibonakala ilungile kwaye ilungile ngasekupheleni kwenqanaba lakho ngokukhawuleza ...
njani ukususa ukuhlaziywa kakubi kwamanga malunga nenkampani yam?
Ndikususa njani ukuphononongwa okungalunganga kunye nobuxoki malunga nenkampani yam? Ulwazi kwi-Intanethi lukhohlisayo. Zama ukuba ungenzi umbono ombi ngesiqu sakho. Yiyo yonke imfihlo =) Ndivile ukuba ngoku unoku-odola ...
I-Bank ye-Savings ngumthengisi. Ndingumxhasi webhange lokulondoloza, ndingayinxibelelana njani ngokutshintshiselana?
I-sberbank broker. Ndingumthengi weSberbank, ndingathengisa njani ngayo kutshintshiselwano? ibhanki yenzelwe ukuphosa imali. I-Sberbank ayinayo indawo yayo yokuthengisa, oko kukuthi, ukuthengisa ...
Iindleko zokusetyenziswa kwexesha
Ixesha lokusebenza kweendleko zokusebenza ziindleko ezinxulunyaniswa nokusetyenziswa kwepropathi eqeshiweyo. Uluhlu olucacileyo lweendleko ezinjalo alwenziwanga ngumthetho. Ukwenziwa kwawo kumiselwe ngokunxulumene nento nganye yokurenta. Iindleko ze ...
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,744.